Mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jaziiradda Carabta oo la wareegay magaalo Istiraatiiji ah oo dhacda dalka Yaman. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Feb 13, 2016 189 0
Mujaahidiinta Alqaacida ee wadamada Jaziiradda Carabta ayaa wada is fidin ballaaran, taas oo ay ku doonayaan iney kula wareegaan dhulka ballaaran ee Yaman si loogu maamulo Shareecada Islaamka.
Wixii ka dambeeyey markii Xuuthiyiintu la wareegeen inta badan dalka Yaman, waxay Mujaahidiintu oo kaashanaya Qabaa’ilka Suniyiinta ah bilaabeen weeraro culus oo ka dhan Xuuthiyiinta, waxaana Natiijada ay noqotay in la waxyeeleeyo Shiicada, islamarkanaa la helo dhul ballaaran oo lagu maamulo Shareecada Islaamka.
Maalintii shalay oo Isniin ahayd ayaa dagaalyahano katirsan Mujaahidiinta Ansaaru-Shareeca oo ah garabka Alqaacida ee Yaman gudaha u galeen magaalada muhiimka ah ee Cazzaan ee gobolka Shabwah oo dhaca koonfur bari dalka Yaman.
Ciidamo aad u hubeysan oo katirsan Mujaahidiinta islamarkaana sita Raayada Towxiidka ayaa jihooyinka kala duwan kasoo galay Magaalada, iyagoona dhigay Baro Kontorool oo lagu xaqiijinayo Amaanka dadka Muslimiinta ah.
Inkastoo lasoo warinin wax dagaallo ah oo ka dhacay magaalada, hadana waxaa la sheegayaa in Maleeshiyaadkii ku sugnaa magaalada ay ka carareen markii ay ka war heleen in lagu soo food leeyahay.
Magaaladan oo sanadkii 2011 ku jirtay gacanta Mujaahidiinta Ansaaru-Shareeca ayaa ka baxdey gacantooda kadib Xamlo gaaleed ay Ciidamada Yamaniyiintu kusoo qaadeen gobolada koonfurta dalka Yaman.
Cazzaan ayaa ku biireysa magaalooyin dhowr ah oo mudooyinkii ugu dambeeyey ay la wareegeen Mujaahidiinta Ansaaru-Shareeca kuwaas oo haatan lagu dhaqo Sharciga Islaamka oo dhameystiran, waxaana magaalooyinkaas kamid ah Mukalla, Zinjibaar, Xowdha, iyadoona ay intaas dheertahay deegaanda faraha badan ee Mujaahidiintu gacanta ku hayaan.